अर्थ – Page3– Rajdhani Daily
काठमाडौं । मालवाहक सवारी ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल अनिवार्य नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रदर्शन गरेको छ । महासंघले शुक्रबार काठमाडौंको न्युरोड सडकमा निस्किएर माग गर्दै प्रदर्शन ...
कर्मचारी सञ्चय कोषले ब्याज घटायो
काठमाडौं ।कर्मचारी सञ्चय कोषले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी र घर सापटीमा गत १ साउनदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको छ । कोषले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा योगदान पु‍¥याउन र सञ्चयकर्तालाई घरसापटीमा राहत ...
पुँजीगत लाभकर कार्यान्वयन नहुँदै विवादमा
काठमाडौं । पुँजीगत लाभकर गणना विधि कार्यान्वयनमा आएको दुई दिन नबित्दैदेखि विवाद सुरु भएको छ । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले पुँजीगत लाभकर गणना विधि सम्बन्धमा आएका समस्या तत्काल समाधान नगरे कडा रू...
लैनो भैंसी पाल्ने किसानलाई एक लाख अनुदान
चितवन । चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाले लैनो भैँसी पाल्ने किसानलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमबीच गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले तीन दुहुना भै...
सुनको मूल्यले इतिहास रच्यो, प्रति तोला कति ?
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा शुक्रबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सुनको यो बजार मूल्य हालसम्मकै बढी हो । गत ६ असारमा सुनले प्रतितोला ६५ हजार र...
बिमा कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर, क्रस होल्डिङ भएका कम्पनी मर्ज गर्ने तयारी
काठमाडौं । बिमा समितिले क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरूलाई मर्जमा लाने तयारी गरेको छ । अहिले अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी पु¥याएका छैनन् । त्यस्ता पुँजी पु¥याउन नसक्ने तथा पुँजी पुगे पनि क्रस होल...
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून
वीरगन्ज। वीरगन्ज भन्सारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई ...
नेप्सेमा सुधार, सेयरमा लगानीकर्ता उत्साहित
काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भएको यो साताभरि परिसूचकमा उत्साह कायम रहेको हो । यद्यपि, कारोबार रकम भने...
कुन समयमा सेयर कारोबार गर्दा पुँजीगत लाभकर लाग्छ ? सेयर खरिदबिक्री भएकै समयमा कर लाग्छ । अग्रिम कर कट्टीका रूपमा दाखिला हुनुपर्छ । सम्बन्धित करदाताले आय विवरणका साथ लाभको गणना गरी करयोग्य आय निकाल्नुप...
तरकारीमा क्लोरोपाइडापस विषादी प्रयोग
काठमाडौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न ठाउँबाट उत्पादन भएका नौ थरीका तरकारीमा विषादीको परीक्षण गर्दा क्लोरोपाइडापस नामक विषादी प्रयोग गरेको फेला पारेको छ । विभागमा रहेको अन्तर्राष्...